BUDDHIST TERMS' Dictionary: MEMBER OF THE BUDDHIST ORDER - ဘိက္ခု
MEMBER OF THE BUDDHIST ORDER - ဘိက္ခု
MEMBER OF THE BUDDHIST ORDER Bhikkhu
ဘိက္ခု - ရဟန်း၊ ဘုန်းကြီး၊ သံသရာဘေးကို ရှုလေ့ရှိသူ။
၁။ လူဝတ်ကြောင်ဘ၀ဖြင့် ဒါန သီလ ဘာဝနာအလုပ်ကို အချိန်ပြည့် ဖြည့်ကျင့်ရန် မလွယ်ကူလှချေ။ ရဟန်းဘ၀ဖြင့်သာ ဖြည့်ကျင့်နိုင်၏။ ဆံပင်ကို ပယ်ဖြတ်၍ ခေါင်းတုံးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်အတွက် ကြောင့်ကြစိုက်ရသော ဖီးလိမ်းပြင်ဆင် ပြုပြင်ရသော လုပ်ငန်းတာဝန်များ လျော့နည်းခဲ့ကြရ၏။ ဆံပင်၌ တွယ်တာမြတ်နိုးမှုကိုလည်း ပယ်ဖျောက်ရာရောက်၏။ ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ပေါ့ပါးကြည်လင်ကာ စိတ်အေးငြိမ်းမှုကို ခံစားရ၏။ ရဟန်းဘ၀ကား ကုန်သွယ် လယ်လုပ်ခြင်းစသော လူမှုကိစ္စများမရှိ၊ ရိက္ခာသိုမှီး သိမ်းဆည်းရခြင်းမရှိ။ တရားကျင့်နိုင်ရုံ တစ်ထပ်စာမျှ ဆွမ်းကို သပိတ်တစ်လုံးဖြင့် အိမ်စဉ်လှည့်၍ ဆွမ်းခံရ၏။ တစ်ဇွန်းတစ်ယောက်မမျှဖြစ်၍ လှူရသူလည်း ၀န်မလေး၊ အချင်းချင်းငဲ့ညှာ တွယ်တာမှုလည်း မဖြစ်၊ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ရသမျှနှင့် ရောင့်ရဲခြင်းဖြင့် လောဘကို ပယ်ဖျောက်ရာရောက်၏။ အလှူရှင်တို့အတွက် ကုသိုလ်တရား တိုးပွားနိုင်၏။ အ၀တ်အထည် ၀တ်ရုံမှု၌လည်း အပိုင်းပိုင်း အပြတ်ပြတ် ဖြတ်ညှပ် ဆက်စပ်ချုပ်လုပ်၍ ဖန်ရည်ဆိုးသော သင်္ကန်းသုံးထည်ကို ရဟန်းတော်များဝတ်ရုံသုံးဆောင်တော်မူနိုင်ကြ၏။ အ၀တ်အတွက်လည်း ကြောင့်ကြရန် တာဝန်မကြီး။ နေထိုင်ရန်အတွက်လည်း သစ်တစ်ပင် ၀ါးတစ်ပင်အောက်၌ နေထိုင်ရလျှင်ပင် ကျောင်းအိပ်ရာ နေရာအတွက် ပြီးပြည့်စုံနေပြီးဖြစ်၏။ အချုပ်အားဖြင့် ရဟန်းဘ၀သည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ် ချမ်းသာရေးကို ဦးစားမပေး။ ခန္ဓာကိုယ်၏ ကျေးကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး သံသရာထွက်မြောက်ရေးကိုသာ ဦးတည်ချက်ထား၏။ ကိလေသာ ခေါင်းပါးလျော့နည်း ပပျောက်ရေးကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ကျင့်ဆောင်နေရသည်ဖြစ်၍ “ရဟန်းဘ၀သည် လောက၌ ချမ်းသာ၏ ဟူသည် အဘယ်နည်း”ဟူသော မေးခွန်း၏ အဖြေပင်ဖြစ်သည်။
၂။ ရဟန်းသုံးမျိုးရှိသည် -
(က) ထေရ - ဆယ်ဝါအထက်ရဟန်း၊
(ခ) မဇ္ဈိမ - ငါးဝါမှ ကိုးဝါရပြီးသောရဟန်း၊
(ဂ) န၀ - ငါးဝါအောက် ရဟန်း။
One concerned about the dangers of recurring rebirths; recluse
1. Foralayman it is not easy to fully observe the precepts, to be engaged in giving charity or to develop meditation practice. As forabhikkhu, having his head shaven, there is no need for beautification or to care for or be attached to his hair. Thus he is light-hearted can carefree. When going round for alms-food from one house to another he takes for his morning meal just enough to enable him to perform his meditation practice. Indeed,aspoonful of rice is notaburden foradonor, he is content with whatever food he receives, whether good or bad, and thus he feels no craving for food. Besides, it is sufficient for him to stay underashady tree for shelter. Food, clothing and shelter which are the most fundamental needs of human beings are unimportant in the life ofabhikkhu. A bhikkhu does not care much for physical pleasure. He tries to be free from beingaslave of his body, for his ultimate goal is to lessen and get rid of rebirths. Indeed, the secluded life ofabhikkhu is the answer to the question, “What is the meaning of peace and happiness?”
2. There are three categories of bhikkhu:
(a) Therabhikkhu or elders are bhikkhus who have spent ten or more years in the Order;
(b) Majjhimabhikkhu or those of middle stnding who have been in the Order from five to nine years;